शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू ! – Khabar Silo
शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू !
काठमाडौँ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता केही राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुषहरू प्रति महिलाहरू धेरै नै आकर्षित हुन्छन् । धेरै जसो युवतीहरूको आफ्नो उमेर परिपक्व भैसकेपछी आफ्नो जीवन साथीको बारेमा हर समय सोच्ने गर्दछन् । कि धेरै माया गर्ने असल जीवन साथी परोस् । यसो त केटाहरूले नसोच्ने भन्ने पनि होइन । केटाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा दुख सुखमा साथ दिने राम्री श्रीमती परोस् भन्ने कुरा सोचिरहेका हुन्छन् ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आज हामीहरू यस्ता केही राशिको बारेमा बताउन गएका छौ जुन राशि भएका महिलाहरू पुरुष प्रतिआकर्षित हुने गर्छन्।
कन्या राशि : कन्या राशी भएका पुरुषहरु निकै भावुक हुने गर्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुले आफ्नो प्रेमीका हरेक भावनालाई कदर गर्छन्। प्रेमीकालाई दुख नहोस भन्ने मनाशय बोकेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीकाको गल्तीमा सजिलै माफी दिन सक्ने खुबी भएका हुन्छन्।
सोनीका पागल भईसके भन्दै दिईन कडा चेतवानी पुण्य गौतमले सडकमै खाए खाना
दुई बर्षकी छोरीको ला`श प्लास्टिकमा लपेटेर मोटरसाइकलमा लग्दै गरेको कारण बाहिरिदाँ दुनियाँकै ह्दय रसायो । उपचारमा क्रममा सन्तान गु`मा´एका आमाबाबुले अस्पतालबाट एम्बुलेन्स समेत पाएनन् । यो अमानवीय घ`टनाले अहिले दुनियाँकै ह्दय रसाएको छ । भारत, छत्तीसगढ राज्यमा को-रोना संक्रमणको कारण बन्द भएको बेलामा अस्पताल व्यवस्थापनले देखाएको यस्तो हर्कतले सबैलाई लज्जित बनाएको छ । जान्जिगीरमा दुई […]
Posted on March 18, 2021 Author khabar silo
मोरङ जिल्ला बेलबारी छ बाउनी निबासी काजीलाल चौधरी नाम गरेका एक चौधरी वृद्धले बीस बर्षिया युवती रबिना चौधरीसंग बिबाह गरेका छन । निकै अचम्म लाग्ने उनिहरुको बैबाहिक सम्बन्ध गासिएको लगभग चार बर्ष भैसकेको छ । अझै अरु अचम्मै लाग्ने जोडीको भित्री कथा भने अर्कै छ । गरिबी अनि दुखै कष्टको जीवन बिताएकि रबिनाको कलिलो उमेरमै […]
यो हो विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन्दरी भएको देश !